Xildhibaanadii foodada ka abuuray Doorashadii Aqalka Sare ee Hirshabelle oo talaabo laga qaadayo | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Xildhibaanadii foodada ka abuuray Doorashadii Aqalka Sare ee Hirshabelle oo talaabo laga...
Xildhibaanadii foodada ka abuuray Doorashadii Aqalka Sare ee Hirshabelle oo talaabo laga qaadayo
Waxaa xalay buuq iyo rabshado hareeyeen doorashada kuraasta mid kamid ah Aqalka sare oo xalay ka socotay magaalada Jowhar, waxaana buuqaasi uu sababay in hoolka doorashada ka socotay lagu kala tago iyada oon doorashada dhamaan.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa sheegay in ay sii socon doonto doorashada xubnaha Aqalka sare ee harsan , waxa uuna sheegay in talaabo laga qaadayo Xildhibaanadii rabshada sameeyay.
Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa sheegay in guddiga anshaxa ee Baarlamaanka Hirshabelle loo gudbiyay dacwad ka dhan ah xildhibaanadii xalay buuqa ka sameeyay doorashadii Aqalka Sare ee ka socotay magaalada Jowhar.
Gudoonka Baarlamaanka Hirshabelle iyo guddiga doorashada ayaan wali ka hadlin sida laga yeelayo kursigii buuqa ka dhashay xalay xili lagu guda jiray tirinta Codadka ay dhiibteen Xildhibaanada Hirshabelle.
Previous articleShirkada Somtel oo Abaalmarino kala duwan siisay Macaamiisheeda (Sawirro)
Next articleHow an intelligence officer’s disappearance in Somalia has ripped the government apart